Epistily ho an'i Titosy - Wikipedia
Ny Epistily ho an'i Titosy na Epistola nosoratan'i Masindahy Paoly ho an'i Tito na Taratasy nosoratan'i Masindahy Paoly ho an'i Tito dia boky hita ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Vaovao, izay atao hoe epistily. Taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Titosy ( na Tito) io epistily io. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 60 sy 68 no nanoratana azy. Misy toko 3 ity boky ity.
2 Zava-misy manodidina sy famintinana
Επιστολή προς Τίτο / Epistolê pros Tito no fiantsoana azy amin'ny teny grika fa Epistula ad Titum kosa amin'ny teny latina. I Titosy dia mpianatr'i Kristy sady mpiara-dia amin'i Paoly.
Taorian'ny fahafahan'i Paoly tamin'ny famonjana azy voalohany tany Roma dia nitory ny Vaovao Mahafaly (na Filazantsara) tany amin'ny nosy Kreta izy. Talohan'io dia nitoetra fotoana fohy fotsiny tao i Paoly, amin'ny maha voafonja azy, tamin'ny nandehanany mankany Roma hotsaraina eo anatrehan'ny emperora.
Rehefa niainga avy tao amin'ny nosin'i Kretosy i Paoly dia navelany eo i Tito (na Titosy), iray amin'ireo mpiara-miasa aminy akaiky, izay tsy Jiosy, izay nampamitainy iraka sarotra matetika, indrindra ny tany Kretosy. Nambaran'i Paoly aminy ny fanatanterahana ny fandaminana sy ny rafitry ny fiangonana naoriny tao (Tito 1.5) ka izany dia tao anatin'ny toe-javatra manahirana (Tito 1.12-15).
Nanome fotoana an'i Tito i Paoly talohan'ny ririnina tao Nikopolisy, any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Grisia (Tito 3.12). Tokony ho tany Makedonia no nanoratan'i Paoly ny epistily miaraka amin'ny Epistily voalohany ho an'i Timoty. Ireo epistily roa ireo dia ahitana fitoviana betsaka, na amin'ny voambolana, na amin'ny fomba fanoratra, na amin'ny lohahevitra momba ny fitondram-piangonana ("pastoraly").
Taorian'ny nampahatsiahivan'i Paoly ny toetra tokony hananan'ireo mpiandraikitra ao amin'ny fiangonana dia nokianin'i Paoly ireo fahadisoana sy ireo fiheverana jiosy izay mifanohitra amin'ny fampianarana kristiana marina (Tito 1). Avy eo dia nanafatra an'ireo antoko samihafa ao am-piangonana izy (Tito 2) ka namarana ny taratasy amin'ny fampahatsiahivana ny fiasam-pahasoavan' Andriamanitra izay mitondra ny mpino hiaina araka ny Filazantsara (na Vaovao Mahafaly).
↑ Jereo: Asan'ny Apostoly toko faha-28
↑ Jereo: Asan'ny Apostoly 27.7-8.
↑ Jereo: Epistily ho an'ny Galatiana toko faha-2 hatramin'ny faha-3
↑ Jereo: Epistily faharoa ho an'ny Korintiana 2.12-13 sy 7.6-7.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_ho_an%27i_Titosy&oldid=1038774"
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 10:33 ity pejy ity.